Akom-baovao DRMRS Melaky: Hetsika fambolen-kazo tao Andabotoka Maintirano – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Akom-baovao DRMRS Melaky: Hetsika fambolen-kazo tao Andabotoka Maintirano
Ho fandraisana ny anjara tandrify amin’ny famerenana an’i Madagasikara ho rakotra ala, tontosa soa aman-tsara ny hetsika fambolen-kazo nokarakarain’ny Fitaleavam-paritry ny harena an-kibony tany sy Loharanonkarena Stratejika DRMRS Melaky, ny faha-04 Febroary 2022 tao Betongolo, CR ANDABOTOKA.
Tonga maro nifanotrona tamin’izany ireo mpandray anjara samihafa nahitana ireo talem-paritra, lehiben’ny sampandraharaha miankina sy tsy miankina amin’ny Fanjakana, mpiasam-panjakana isan-tsokajiny, sivily sy miaramila ary ireo mpiasa vato.
Zanakazo acacia 10 000 no novolena tamin’ny velarantany mirefy 10 ha ary naharitra ora enina eo ny faharetan’ny fambolena.
Nahatsiaro fifaliana ny rehetra amin’ny famerenana ny ala ao amin’ny Faritra Melaky.
Ny Talem-paritra DRMRS Melaky dia manolotra fisaorana feno ho an’ireo rehetra tonga nandray anjara ka nahatontosana ity hetsika fambolen-kazo ity. Mankasitraka manokana ihany koa ny Fitaleavam-paritry ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovain-jafy DREDD Melaky tamin’ny famatsiana ireo zana-kazo, ny Ben’ny Tanàna Andabotoka sy ireo mpandraharaha mpiara-miombon’antoka nanampy tamin’ny nofon-kena mitam-pihavanana sy ny tohanaina ary ny fiara fitaterana.
« Fambolen-kazo, fanarenana loharano, antoky ny fiveloman’ny mponina »
← Seha-pihariana vato sy volamena DRMRS SAVA: Ben’ny tanàna an’ireo kaominina 19 mandrafitra ny distrika Vohemar nizarana ireo tsara ho fantatra
Akom-baovao DIRMRS Mahajanga sy DIRMRS Alaotra Mangoro →